G uangzhong Aiweidy Lighting Acoustics Equipment Co, Ltd, ndiko wokutsvakurudza uye kuvandudza, kugadzira, rokutengesa uye basa nemazvo chiedza uye ruzha munhandare pamusoro yepamusorosoro emakambani Company iri muna Baiyun District of Guangzhou City, kufukidza 15 acra, kuvaka nzvimbo pamusoro 25000 mamita ^. Garden miriwo, zvishongo tsime mukati mudhamu. 700 M ^ 2 fekitari kuzvisikwa multi-yaishandiswa Studio, vanopfuura 1,000 mativi metres ano sehofisi.
C ompany haangogoni kugadzirwa michina yemhando, asiwo dzinoverengeka yepamusoro, mukuru ano, mainjiniya kwounyanzvi uye kwokunatsiridzwa nyanzvi uye michina vashandi, vakawanda vanoshingaira, yokubatana rakaisvonaka mudonzvo.
A iweidy zvigadzirwa zvine mukurumbira wakanaka pamusika dzakawanda, kunyanya nokuda kwedu kubvongodzwa musoro zviedza, akatungamirira magetsi uye Outdoor mwenje. Zvino, zvinhu zvedu aivigirwa kuna Europe, Southeast Asia, kuMiddle East, North neSouth America nedzimwe nyika uye kumatunhu. Achitarira mberi, vashandi vose Aiweidy achatanga kukoshesa tenet rakanaka kutanga, basa rokutanga, utsanzi kutanga uye kutendeseka samagariro kushumira vatengi uye shamwari kubva kumba uye kunze.